I-Seychelles yoKhenketho kunye nenqwelomoya ye-Emirates iqala intsebenziswano kwintengiso
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseSeychelles ezaphulayo » I-Seychelles yoKhenketho kunye nenqwelomoya ye-Emirates iqala intsebenziswano kwintengiso
Airlines • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • Ukwakha kwakhona • Iindaba zaseSeychelles ezaphulayo • Tourism • Intetho yezoKhenketho • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba eziHlangayo ze-UAE • Iindaba ezahlukeneyo
I-Seychelles kunye ne-Emirates yobambiswano
I-Seychelles yoKhenketho isungule ubuhlakani bobuchwephesha kunye nenqwelomoya ye-Emirates, iqabane elithembekileyo kunye nomdibaniselwano, kunye nenqwelomoya yokuqala kwilizwe lonke ukubuyela kwesi siqithi kwindawo yokuvula kwakhona ngo-Agasti 2020.
I-Seychelles yamkele ngaphezulu kwe-15,000 yabakhenkethi abavela kwi-UAE ukuza kuthi ga ngoku kulo nyaka.
Amanyathelo okhuseleko kunye neeprotokholi ezichanekileyo ziyilelwe ngokufanelekileyo ukunciphisa ukuhamba phakathi kweendawo ekuyiwa kuzo.
I-Emirates isebenza ngenqwelomoya ezisixhenxe ngeveki isiya eSeychelles isuka eDubai kwaye iyindawo yesibini yentengiso kwimithombo yeziqithi.
Ubambiswano luya kubandakanya uthotho lwamaphulo ajolise ekuziseni i-Seychelles Islands ukubonakala njengeyona ndawo yokuphumla kulo lonke iBhunga leNtsebenziswano kwi-Arab States ye-Gulf (GCC) kwimakethi ngokuhambelana nomxholo onxulumene neSeychelles oza kubonakala kwi-Emirates 'yentlalo amaqonga amajelo osasazo kunye nokuthengisa nge-imeyile kunye nentengiso edibeneyo yerediyo.
Intsebenziswano iya kugcina iindwendwe zisemgangathweni kunye nolwazi malunga nokuhamba kweziqithi, ezamkele ngaphezulu kwe-15,000 yabakhenkethi abavela e-UAE ukuza kuthi ga ngoku kulo nyaka kwaye, ngeCawa, nge-29 ka-Agasti 2021, emi njengendawo yesibini yentengiso yomthombo kwindawo ekuyiwa kuyo. .
Ngapha koko, la maphulo aza komeleza ubudlelwane bezorhwebo kunye nokonyusa ulwazi ngemveliso ngoqeqesho kwi-Intanethi kunye noomasifundisane kunye nohambo lokuziqhelanisa, olujolise kwiindawo ezinemida ngoku evulekileyo yokuhamba.
Ukugcina ukhuseleko entliziyweni ye Ukuya eSeychelles, intsebenziswano iya kugxininisa uhambo olusuka e-Dubai luye kwisizwe esisisiqithi, kubandakanya neenkcukacha ezibalulekileyo ezinje ngamanyathelo okhuseleko kunye neeprotokholi ezichanekileyo ezilungiselelwe lula ukuhamba. Ukongeza, iindwendwe ziya kuba nakho fumanisa oko kugcinelwe iziqithi zeSeychelles ngaphambi kokuba bade bawele kunxweme lwayo olunentlabathi.
Ethetha ngentsebenziswano, uNobhala oyiNtloko kwezoKhenketho, UNkosazana Sherin Francis, uthe, “Ubambiswano ne-Emirates lolunye lukhule ukusuka emandleni ukuya emandleni, kwaye sonwabile ngenkxaso abayithumele kwindawo ekufikelelwe kuyo nakwi-Seychelles yoKhenketho unyaka. Intsebenziswano yalo nyaka iyahlukile. Nangona kunjalo, ngexesha apho umzi mveliso wethu uchacha ngokuthe ngcembe kwaye apho ukwakha ukuzithemba kukhenketho kubaluleke kakhulu, ubuhlakani obufana nale bunentsingiselo kunye nengcaciso entsha. Ngalo msebenzi wobambiswano, iya kuba yimpumelelo kwinqwelo moya nakwindawo esiya kuyo. ”
I-Emirates isebenza ngenqwelomoya ezisixhenxe ngeveki isiya eSeychelles isuka eDubai, abemi base-UAE kunye nabahlali ngoku banokuthi bacwangcise uhambo olungaqhelekanga kwilizwe lamanzi aluhlaza, unxweme lweeperile kunye neentaba zeemerald, bekhetha kwenye yeendawo zokutyela ezintle okanye iindwendwe ezinomtsalane zokuhlala kwabo. .
Ukungena eSeychelles kufuna ubungqina bovavanyo olubi lwe-COVID-19, olwenziwe kwisithuba seeyure ezingama-72 zomhla wokuhamba kunye nokuvunywa kwi-App ye-Health Travel Authorization app. Ulwazi oluthe kratya malunga nokuhamba kwiparadesi yesiqithi lunokufumaneka 'seychelles.visvis.travel.'
NgoSeptemba 25, 2021 kwi-05: 24
Siyazi, i-Emirates Airline yandisa isivumelwano sayo sokuthengisa kunye neSeychelles. Iimfuneko ze-COVID-19 zovavanyo, ukuya nokubuya eDubai, ukuhlala ukhuselekile, kunye nokukhetha kwethu ukubuyekeza amatikiti.